Ukuvakasha kwamabhayisikili nokuhamba ngebhayisikili. BikeHike Bicycle Site
Umbuzo: Imelelani i-Cc Emabhayisikili
Posted on Kwangathi 20, 2021 By danna
Amandla enjini yesithuthuthu akalwa ngokomthamo wama-cubic. Umthamo we-cubic, owaziwa nangokuthi "cc" wezimoto, ngokuvamile uhluka phakathi kuka-50cc kuya ku-1500cc. Kunjalo futhi
Indlela Yokwandisa Ivelu Yabanikazi Bamasheya Kumabhayisikili akwaMikes
Ukwandisa Ivelu Lomnikazi Wamasheya kufanele: Ukhulise Inzuzo; Nciphisa Ukutshalwa Kwezimali Kwabanamasheya; Nciphisa Isikweletu; kanye.Namasu okwehlisa izindleko: Yehlisa i-inventory.Yehlisa I-Prime Cost yoMkhiqizo wakho.Yehlisa ukumoshwa ekukhiqizeni.Gxila ku.
Umbuzo: Iyini Ibhayisikili le-Bmx
Nakuba behlanganyela izinto eziningi ezifanayo, amabhayisikili ezingane asezintabeni namabhayisikili e-BMX empeleni ahluke kakhulu. Amabhayisikili e-BMX aklanyelwe abagibeli abenza amaqhinga, ama-jump, ama-stunts, amadolobha
Lapho Unikela Ngamabhayisikili Eduze Kwami
Nikela Ibhayisikili Lakho Elidala Ngesizathu Esihle Ungakwazi ukunikela ngalo esitolo esikhudlwana sokusiza abantulayo, kodwa ngicela ubabuze ukuthi bangalamukela yini
Impendulo Esheshayo: Ahamba Ngokushesha Kangakanani Amabhayisikili Kagesi
Ibhayisikili likagesi lingahamba ngokushesha kangakanani? Uma uhamba nge-pedali, ungahamba ngokushesha ngendlela okwazi ngayo ukuyinyathela. Nokho, amabhayisikili amaningi ayayeka ukunikeza usizo lukagesi
Indlela Yokukhipha Ukugqwala Emabhayisikili
Indlela yokususa ukugqwala ebhayisikilini! Hlanganisa i-baking soda noviniga ku-paste bese wengeza ijusi ye-lime encane. Ukusebenzisa ibhulashi, sebenzisa ukunamathisela kukho konke
Lapho Ugibela Amabhayisikili Angcolile Eduze Kwami
Izithuthuthu ezisheshayo ezingu-1000cc ngokuvamile zikhawulelwe ku-188 mph nge-rev limiter yazo, evikela injini yemoto ngokukhawulela isivinini sayo esiphezulu. Kodwa-ke, uma lezi zithuthuthu ezinesivinini esikhulu zinjalo
Ungawathola Kanjani Womabili Amabhayisikili Oras
Ungawathola kanjani womabili amabhayisikili ku-ORAS Fly uye ku-Route 119 futhi ukhuphuke i-Waterfall eseduze. Ndizela ku-Route 111 bese ungena ogwadule usebenzisa i-Go-Goggles. Ndize uye ku
Isigqoko sebhayisikili: ukukhetha, ubukhulu, ukuhambisana
Posted on July 12, 2014 September 15, 2021 By danna Awekho amazwana kusigqoko sebhayisikili: ukukhetha, usayizi, ukuhambisana
Ubhekene nokukhetha: thenga isigqoko sokuzivikela noma uhambise intombazane endaweni yokudlela epholile, iyiphi i-helmet ozoyikhetha? Ngiwuyekile lo mbuzo isikhathi eside, kodwa ekugcineni sekuyisikhathi sokukhuluma ngendlela yokukhetha isigqoko sebhayisikili. Njengesakhamuzi esinesibopho, ngathenga umakalabha cishe ngokushesha ngemva kokuthenga...
Funda kabanzi "Isigqoko sebhayisikili: ukukhetha, usayizi, ukuhambisana" »